News – ZEUS Myanmar
Comic fact, info, review and explain
Dawn Art Studio
Martin Scorsese နဲ့ Leonardo တို့ရဲ့ Series တစ်ခုမှာ ပါဝင်လာဖို့ ဆွေးနွေးနေတဲ့ Keanu Reeves
No Comments on Martin Scorsese နဲ့ Leonardo တို့ရဲ့ Series တစ်ခုမှာ ပါဝင်လာဖို့ ဆွေးနွေးနေတဲ့ Keanu Reeves
မင်းသား Keanu Reeves ဟာ Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio, Todd Field နဲ့ San Shaw တို့ရဲ့ ‘ The Devil in the White City ‘ Hulu Series adaption မှာ သရုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် ဆွေးနွေးနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
The Devil in the White City ကတော့ Architect တစ်ယောက်နဲ့ Serial killer တစ်ယောက်တို့ရဲ့ True Story တစ်ခုအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Timeline အရတော့ 1893, The Chicago World’s Fair မှာဖြစ်ပြီး Murder, Romance နဲ့ mystery genres မျိုးအဖြစ်နဲ့ လာမှာဖြသ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Project ဟာ Reeves ရဲ့ ပထမဆုံး Major U.S TV role တစ်ခုလည်းဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
2010 ခုနှစ်မှာ Leonardo DiCaprio ဟာ အဆိုပါ စာအုပ်ရဲ့ Film Rights တွေကိုဝယ်ယူခဲ့ပြီး Martin Scorsese ဟာ Paramount နဲ့အတူ ရိုက်ကူးသွားဖို့ရှိခဲ့ပါတယ်။
2019 မှာတော့ အဆိုပါ Project က Big Project series အနေနဲ့ ထွက်ရှိလာမှာဖြစ်ပြီး Leonardo DiCaprio နဲ့ Martin Scorsese တို့ဟာ Exce Producer များအနေနဲ့ တာဝန်ယူသွားမှာဖြစ်ကြောင်း Hulu ကနေ Announce လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဝါရင့် အတတ်ပညာရှင်အချို့ဖြစ်တဲ့ Rick Yorn, Sam Shaw, Jennifer Davidson နဲ့ Stacey Sher တို့လည်း Production ထဲပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။
Keanu Reeves ပါဝင်ထားတဲ့ The Matrix Resurrection ဟာ အရင်နှစ်ရဲ့ နှစ်ကုန်မှာ ထွက်ရှိသွားခဲ့ပြီး John Wick: Chapter4အတွက်လည်း ရိုက်ကူးလျက်ရှိပါတယ်။ 2023 မှာ ထွကိရှိလာမယ့် DC League of Super-pets animation မှာလည်း Voice actor အဖြစ်ပါဝင်ထားပါသေးတယ်
Marvel MCU News
Doja Cat , The Weeknd , Solange , Stormzy တို့ ပါဝင်လာတဲ့ Black Panther2soundtrack
No Comments on Doja Cat , The Weeknd , Solange , Stormzy တို့ ပါဝင်လာတဲ့ Black Panther2soundtrack
Black Panther (2018) ရဲ့ soundtrack ကိုလည်း award-winning rapper တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Kendrick Lamar ကိုယ်တိုင် producer အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပီး The Weenknd , Travis Scott , Khalid , SZA တို့ featured ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
Kendrick Lamar ရဲ့ Black Panther soundtrack ထဲက ” All the Stars ” “Pray for me” “King’s Dead စတဲ့ သီချင်းတွေကလည်း Top Charts တွေမှာ ရက်ပေါင်းများ ထိပ်ဆုံးထိရောက်ဆီခဲ့ပီး အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ပါတယ်။
အခုလည်း 2022 November မှာ ရုံတင်ပြသမဲ့ Black Panther : Wakanda Forever ရဲ့ soundtrack မှာ သီဆိုဖို့ Top Rapper Artists တချို့ကို စုစည်းနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
Metro news ရဲ့ report တွေကအရ အရင် Album မှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ The Weeknd လည်းပြန်လည်ပါဝင်ခဲ့ပီး Line up မှာတော့
Stormzy တို့ ပါဝင်လာမယ်လို့ သိရပါတယ်။ Kendrick Lamar ကတော့ သူရဲ့ နောက်ထပ်album အသစ်ကြောင့် အခုထိ မပါဝင်လာသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။
အစောပိုင်းသတင်းတွေအရ Canadian rapper တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Tory Lanez လည်းပါဝင်လာနိုင်ပီး အရင် Album မှာ singer 24 ယောက်အထိ team up လုပ်ခဲ့တာကြောင့် နောက်ထပ် rapper တွေကိုလည်း စုစည်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။
Black Panther: Wakanda Forever soundtrack ကိုတော့ ရုံတင်ပြသတဲ့ November 11, 2022 ကျမှသာ release လုပ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Doctor Strange In The Multiverse of Madness နှင့်ပတ်သက်၍ Rumors များ
No Comments on Doctor Strange In The Multiverse of Madness နှင့်ပတ်သက်၍ Rumors များ
Marvel Cinematic Universe ကြီးဟာ phase တွေ အဆင့်ဆင့်ကို ဖြတ်ကျော်ပြီး ခရီးဆန့်လာခဲ့ရာမှာ ယခုအခါ စတုတ္ထမြောက် phase ကို ရောက်ရှိလာပြီ ဖြစ်သလို cinematic universe ကြီးဟာလည်း ဇာတ်ကောင်အသစ်တွေ story အသစ်တွေနဲ့အတူ တော်တော်ကြီး ကျယ်ပြန့်လာခဲ့ပါပြီ။
ဒီလို ကျယ်ပြန့်လာတာနဲ့အမျှ Marvel ဟာလည်း ရှိပြီးသား ဇာတ်ကောင်တွေအပြင် အသစ်တွေကိုပါ debut လုပ်ကာ ချပြလာခဲ့ပြီး အခု phase မှ စတင်လို့ ပထမ saga ရဲ့ အဆုံးသတ် Endgame ထက်တောင် ပိုကြီးမားမယ့် Event ကြီးတစ်ခုဆီ ဦးတည်သွားဖို့ လုပ်နေတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ Phase4saga အတွင်း Loki တို့ No Way Home တို့ What If? တို့လို ဇာတ်လမ်းတွေမှာ Multiverse လို့ခေါ်တဲ့ အပြိုင်စကြဝဋ္ဌာတွေ ရှိကြောင်းကို ပြသခဲ့ပြီး အဆိုပါဇာတ်ကားတွေဟာလည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုတွေ အားလုံးကို မထွက်ခင်ထဲက သိမ်းယူထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အထူးသဖြင့်ကတော့ No Way Home ပါပဲ ။ ရုံမတင်ခင် တစ်နှစ်လောက်အလိုထဲက rumors တွေ theory တွေနဲ့ Fan တွေကို မျှော်လင့်ချက်တွေပေးပြီး hype စေခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်တစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့် No Way Home ရဲ့ rumors တွေဆိုတာ နောက်နှစ်အတွင်း ထွက်ရှိတော့မယ့် Multiverse of Madness နဲ့ ယှဥ်လိုက်ရင် အသေးအမွှားသာသာပဲ ရှိပါတော့တယ် ။ ဘာ ကြောင့်ဆို Multiverse of Madness ဟာ Multiverse of Rumors လို့ ဆိုရလောက်မယ့်အထိကို ကောလဟာလတွေ တအားများလို့ပါပဲ။
ဇာတ်ကောင်တွေဟာလည်း Endgame တို့ Infinity War တို့နီးနီးကို များပါတယ်။ အဲ့အပြင် Multiverse of Madness ရဲ့ MCU အပေါ် အကြီးအမား impact ဖြစ်စေမယ့် ဇာတ်ကားတစ်ခုဖြစ်ပြီး Multiverse ကိုလည်း သေချာ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကြီးကို မြင်တွေ့ရမယ့် ရုပ်ရှင်တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကားဟာ Wandavision နဲ့ No Way Home ဖြစ်ရပ်တွေအပြီး အကျိူးဆက်တွေကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်သလို Marvel ရဲ့ Multiverse တောက်လျှောက်က ဇာတ်ကောင်အသစ်တွေ အများကြီးကိုလည်း debut လုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လတ်တလော ထွက်ရှိလာတဲ့ သတင်းအချိူ့အရလည်း Multiverse of Madness ဟာ Reshoot တွေ ပြန်လုပ်နေပြီး multiverse မှာရှိနေတဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေကို cameo သဘောနဲ့ ထည့်ချင်တာကြောင့် အဆိုပါ reshoot တွေ ပြန်လုပ်နေရတယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။ ဒီအတွက်ကြောင့် Multiverse of Madness မှာ ပါဝင်လာမယ့် character တွေထဲက confirmed ပြီးသား ဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ rumor ထွက်နေတဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ အောက်မှာ ဆက်လက်ဖတ်ရှုပေးပါ။
– Benedict Cumberbatch as Doctor Strange [Confirmed ]
– Wanda Maximoff/Scarlet Witch [Confirmed ]
– Benedict Wong as Wong [Confirmed ]
– Xochitl Gomez as America Chavez [Confirmed ]
– Chiwetel Ejiofor as Karl Mordo [Confirmed ]
– Rachel McAdams as Dr.Christine Palmer [Confirmed ]
– Michael Stuhlbarg as Dr.Nicodemus West [Confirmed ]
– Adam Hugill as Rintrah [Confirmed ]
– Gargantos [Confirmed ]
– Shuma-Gorath [Confirmed ]
– Bruce Campbell asaUnknown Character [Confirmed ]
– Tom Hiddleston as Loki [Rumored ] – Sophia Di Martino as Sylvie [Rumored ]
– Owen Wilson as Agent Mobius [Rumored ]
– Jonathan Majors as Kang the Conqueror [Rumored ]
– Patrick Stewart as Professor X [Rumored ]
– Hugh Jackman as Logan/Wolverine [Rumored ]
– Ryan Reynolds as Deadpool [Rumored ]
– Andrew Garfield as Peter Parker/Spider-Man [Rumored ]
– Fox’s X-men characters [Rumored ]
– The Illuminati [Rumored ]
– Mr.Fantastic [Rumored ]
– Hayley Atwell as Captain Carter [Rumored ]
– Iron Man Variant [Rumored ]
– Clea [Rumored ]
– Balder the Brave [Rumored ]
– Brother Voodoo [Rumored ]
– Agatha Harkness [Rumored ]
– Ancient One [Rumored ]
– Nightmare [Rumored ]
– Namor the Sub-mariner [Rumored ]
– Mephisto [Rumored ]
– Chthon [Rumored ]
– Marvel Zombies [Rumored ]
အပေါ်မှာ ပြောထားခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲ Rumor ထွက်ထားတဲ့ character တွေကတော့ Marvel comic ထဲက အထင်ကရ ဇာတ်ကောင်ကြီးတွေချည်းဖြစ်တဲ့အပြင် No Way Home ထက်တောင် Rumored character များပါသေးတယ် ။ Fan တွေရဲ့ ဆန္ဒကို အမြဲလိုက်လေ့ရှိပြီး Fan Service ကောင်းတဲ့ Marvel ကတော့ ဒီ rumored list ထဲက အကုန်မဟုတ်ရင်တောင် တော်တော်များများတော့ ထည့်သွင်းမိတ်ဆက်သွားဖို့ များပါတယ်။
Tobey Maguire ရဲ့ Original Spider-Man Trilogy ကို ရိုက်ခဲ့တဲ့ Director Sam Raimi ကပဲ Multiverse of Madness ကို ညွန်ကြား ရိုက်ကူးပေးသွားမှာ ဖြစ်ပြီး MCU ရဲ့ ပထမဦးဆုံးသော Horror ရုပ်ရှင်တစ်ခု ဖြစ်လာမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပုံစံအတိုင်းဆို Multiverse of Madness ဟာလည်း 2022 ခုနှစ်အတွင်း Fan တွေ အစောင့်မျှော်ရဆုံး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ခုဖြစ်လာဦးမှာပါ ။ ပရိသတ်ကြီးရော ဒီ rumored list ထဲက ဘယ်ဇာတ်ကောင်ကို live action အဖြစ် မြင်တွေ့ချင်သလဲဆိုတာ ဖြေသွားကြပါဦး။
ကမ္ဘာကြီးရဲ့ အပြင်ဘက်က သက်ရှိတွေကို ပထမဆုံးရှာတွေ့နိုင်တော့မယ့် The James Webb Telescope
No Comments on ကမ္ဘာကြီးရဲ့ အပြင်ဘက်က သက်ရှိတွေကို ပထမဆုံးရှာတွေ့နိုင်တော့မယ့် The James Webb Telescope
James Webb Telescope ဆိုတာနဲ့ သိထားရမှာက Telescope တွေထဲမှာအကြီးမားဆုံးနဲ့ လုပ်ဆောင်ရည်အမြင့်ဆုံး Telescope တစ်ခုလို့ပဲပြောရပါမယ်။ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ အပြင်ဘက်က သက်ရှိတွေကို ပထမဆုံးရှာတွေ့နိုင်တော့မယ့် The James Webb Telescope ကို ယခုနှစ် December လ ၂၂ ရက်နေ့မှာလွှင့်တင်သွားမည်။
၁။ James Webb Telescope ရဲ့ အဓိက ရှာပုံတော် James Webb
Telescope ရဲ့ အဓိက Mission ကတော့ Universe ကြီးစတင်ပေါ်ပေါက်လာပုံကို ရှာဖွေဖို့နဲ့ ပထမဆုံး Big Bang စတင်ဖြစ်ပွါးခဲ့တဲ့ အခြေအနေကိုထောက်လှမ်းဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
1990 မှာတင်လွှတ်ခဲ့တဲ့ Hubble Telescope ကတော့ ယနေ့အချိန်ထိ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ဝင်ရိုးမှာပတ်နေတုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကတော့ လူသားတွေရဲ့ သာမာန် မျက်လုံးနဲ့ မမြင်နိုင်တဲ့ Particles တွေ Clouds တွေကို အမိအရဖမ်းယူရိုက်ကူးနိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်သန်းပေါင်းများစွာ ကအလင်းတွေကိုလည်း မြင်နိုင်ပါတယ်။
အဲ့ဒါကြောင့်ပဲ Universe ကြီးရဲ့ အရင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို အခုအချိန်မှာ သုသေသနပြုလုပ်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ အားနည်းချက်ကတော့ အရမ်းကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ Galaxies တွေကို မဖမ်းယူနိုင်ပါဘူး။
အခု James Webb Telescope ကတော့ The Hubble Telescope မှာလိုအပ်နေခဲ့တဲ့ နည်းပညာတွေကို အဆင့်မြင့်တင်ပြီး ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်ပဲ စကြာဝဠာကြီးရဲ့ အစောဆုံးအပိုင်းမှာ ဖြစ်တည်နေခဲ့တဲ့ Galaxies တွေကို မြင်တွေ့နိုင်ရုံသာမကပဲ သက်ရှိတွေရဲ့ စတင်မှု့ကိုလည်း အဖြေရှာပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အခုအထိလူသားတွေအဖြေရှာမရနိုင်တဲ့ အရာတွေကိုလည်း James Webb ကအဖြေတွေပေးသွားပါလိမ့်မယ်။ ယနေ့အထိ သက်ရှိတွေရှိနေနိုင်တယ်လို့ယူဆရတဲ့ Exoplanets ပေါင်း ၅၀၀၀ ကျော်ကို သိပ္ပံပညာရှင်တွေရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
James Webb ကတော့ အဲ့ဒီ Planet တွေရဲ့ Atmosphere နဲ့ သူ့ကြယ်တွေရဲ့ Reaction ကိုကြည့်ပြီး Atmosphere တွေထဲမှာ ဘာဓါတ်ငွေ့တွေရှိလဲ ဘာတွေပါနေလဲဆိုတာ သိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ James Webb က အဓိကအနေနဲ့ ရှာမှာတွေကတော့ ရေငွေ့၊ အောက်ဆီဂျင်၊ ကာဘွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်နဲ့ မီသိန်း ဓါတ်ငွေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သက်ရှိတွေရှိမရှိကအဲ့ဒီဓါတ်ငွေ့တွေအပေါ်မှာအခြေခံထားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
၂။ စတင်တည်ဆောက်ခဲ့ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်
James Webb Telescope ကို NASA ရဲ့ ဝန်ကြီးတွေထဲက တစ်ယောက်ရဲ့ နာမည်ကို အစွဲပြုပြီးခေါ်ခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ NASA ရဲ့ အရာရှိတွေထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Dr. Eric Smith က ဆယ်စုနှစ် သုံးခုစာလောက် ကို Telescope တွေကို အဆင့်မြင့်အောင်ပြုလုပ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်။ သူက Hubble Telescope လွှင့်တင်ပြီးကတည်းက ၂၅ နှစ်ကြာ James Webb အတွက် လိုအပ်မယ့် နည်းပညာတွေကို အဆင့်မြှင့်တင်နေခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ၂၀ ရာစု သိပ္ပံပညာရှင်တွေက အကြီးဆုံး Telescope ကိုတီထွင်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ သမိုင်းတွင်ဖြစ်ရပ်ကို မျှော်လင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
၃။ James Webb ရဲ့ အဓိကစွမ်းဆောင်ရည်များ
Hubble Telescope ကတော့ အခုအချိန်မှာ ကမ္ဘာပတ်လမ်းမှာရှိနေပြီးတော့ လူသားတွေရဲ့ အမြင်အားကို အခြေခံထားပြီး သက်တမ်းမကြာသေးပဲ သေးငယ်တဲ့ ကြယ်စင်စုတွေကို အလင်းနှစ် သန်းပေါင်းများစွားကနေမြင်နိုင်အောင် ဒီဇိုင်းဆွဲထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ တချို့ အေးသွားပြီဖြစ်တဲ့ အရမ်းကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ ကြယ်တွေကိုတော့ သူကမမြင်နိုင်ပါဘူး။ James Webb Telescope ကိုတော့ အဲ့ဒီအရာတွေပါ မြင်နိုင်အောင်ပြုလုပ်ထားပါတယ်။
James Webb နဲ့ Hubble ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကတော့ ခြားနားနေမှာပါ။ James Webb ကတော့ မျက်စိနဲ့ မမြင်နိုင်တဲ့ အနီအောက်ရောင်ခြည်ကို အဓိကအနေနဲ့သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဝေးကနေသိပ်မမြင်ရတဲ့ သက်ရှိတွေရှိနေနနိုင်မယ်လို့ ယူဆရတဲ့ Exoplanets တွေက အချက်အလက်တွေကိုပါ ထောက်လှမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အနီအောက်ရောင်ခြည်က အရမ်းထူထဲနေတဲ့ စကြာဝဠာတိမ်တိုက်တွေနဲ့ Nebulas တိမ်တိုက်တွေထဲက နေထိုးဖောက်ပြီး တခြားတစ်ဖက်ကို မြင်နိုင်အောင်အထိ နည်းပညာက မြင့်မားပါတယ်။ အဲ့ဒီကနေပဲ Universe ကြီးရဲ့ ကြယ်တွေရဲ့ စတင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အရင်းအမြစ်ကိုတွေ့နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
၄။ တည်ဆောက်ထားတဲ့ အရင်အမြစ်တွေနဲ့ သူ့ရဲ့တန်ဖိုး
10 billion Dollar တန်ဖိုးရှိတဲ့ James Webb က အဆ ၁၀၀ Hubble ထက်ပိုပြီးသာပါတယ်။ ဘယ်ရီလီရမ်လို့ခေါ်တဲ့ အရမ်းပါးလွှာတဲ့ သတ္တုအမျိုးအစားကို သုံးထားတဲ့အတွက် အရမ်းအေးတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာတောင် အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အနီအောက်ရောင်ခြည်ရဲ့ အနားမှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ အာရုံခံကရိယာဟာဆိုရင်လည်း အရမ်းဝေးတဲ့ စကြာဝဠာထဲက ဂြိုဟ်တွေရဲ့စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်၊ ဘယ်အရာတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာလဲ ဆိုတာရယ် သက်ရှိတွေရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံတွေကို အာရုံခံနိုင်ပါတယ်။
ပြီးတော့ သူ့မှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ အလင်းခံမှန်ဟာလည်း တင်လွှတ်ခဲ့သမျှ Telescope တွေထဲမှာအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး ဆဋ္ဌဂံ ပုံမှန်အသေးလေးတွေ ၁၈ ခုပေါင်းပြီး ဆဋ္ဌဂံ ပုံအကြီးပုံစံပြုလုပ်ထားပါတယ်။ James Webb ရဲ့ မှန်ပေါ်ကအမှုန်လေးတွေကို Connect ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ Adaptive Optic System ကိုသုံးထားပါတယ်။ အဲ့တာကြောင့်ပဲ ကင်မရာတစ်လုံးကို ချိန်ညှိနိုင်ပြီး Error ဖြစ်နေရင်တောင် ချိန်ဆပြီး သုံးလို့ရပါတယ်။
၅။ James Webb ရဲ့တည်နေရာ
Webb အတွက်က ရှင်းလင်းတဲ့
မြင်ကွင်းမှာ ရှိနေဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်ပဲ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ 1 million အကွာအထိ တင်လွှတ်ဖို့ စီစဉ်ထားကြပါတယ်။ အဲ့တာကြောင့် ပြင်ရ ပြုရမလွယ်ကူပါဘူး။
James Webb Telescope ကိုကမ္ဘာကြီးကနေ Ariane5လို့ခေါ်တဲ့ Rocket ကနေသယ်သွားပေးပြီး လနဲ့ လေးဆကွာဝေးတဲ့ အကွာအဝေးကို သယ်ဆောင်သွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
L2 point ( L2 point ဆိုသည်မှာ ကြီးမားသော ပတ်လမ်းကိုယ်ထည်နှစ်ခုအနီးရှိ အမှတ်များဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်၊ အရာဝတ္ထုနှစ်ခုသည် အမှတ်တစ်ခုတွင် ဟန်ချက်မညီသော ဆွဲငင်အားကို ထုတ်လွှတ်ပြီး ထိုအမှတ်၏ ပတ်လမ်းကြောင်းကို ပြောင်းလဲစေသည်။
Lagrange အမှတ်များတွင်ကြီးမားသောကိုယ်ထည်နှစ်ခု၏ ဆွဲငင်အားနှင့် centrifugal force တို့သည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဟန်ချက်ညီသည်။ ၎င်းသည် လိုချင်သောပတ်လမ်းကြောင်းကိုထိန်းသိမ်းရန်အတွက် ပတ်လမ်းပြင်ဆင်မှုအနည်းငယ်လိုအပ်သောကြောင့် Lagrange အမှတ်များကို ဂြိုလ်တုများအတွက် အကောင်းဆုံးတည်နေရာတစ်ခုဖြစ်စေနိုင်သည်။
Lagrange အမှတ်များတွင် ပတ်လမ်းကြောင်းအတွင်း သေးငယ်သော အရာဝတ္ထုများသည် ကြီးမားသောကိုယ်ထည်များ၏ ထုထည်ဗဟိုနှင့် ဆက်စပ်မှု အနည်းဆုံး လမ်းကြောင်းနှစ်ခုတွင် မျှခြေရှိသည်။)
L2 point လို့ခေါ်တဲ့ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ အနောက်ဘက်မှာရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ နေနဲ့ ကမ္ဘာရဲ့ ဆွဲငင်အားကြောင့် L2 point မှာရှိနေတဲ့ James Webb က ဘယ်ကိုမှ မရွေ့ပဲ အဲ့ဒီနေရာမှာပဲအတည်တကျရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
James Webb Telescope ဟာလူသားတွေရဲ့ အလုပ်ချိန် နာရီပေါင်း သန်းပေါင်းများစွာအချိန်ကုန်ခံထားရပါတယ်။ သန်းပေါင်းမျာရစွာသော ပိုက်ဆံတွေနဲ့ နိုင်ငံပေါင်း ၁၅ နိုင်ငံရဲ့ အားထုတ်မှုနဲ့ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ၂၁ ရာစုရဲ့ ကြီးမားတဲ့ အောင်မြင်မှုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Webb က စကြာဝဠာထဲက သက်ရှိတွေကို ရှာနိုင်ဖို့ နောက်ဆုံးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Telescope မဟုတ်သလို နောက်ဆယ်စုနှစ်တခုအကြာမှာ သူ့ထက်ပိုကောင်းတဲ့ Telescope ကိုတင်လွှတ်သွားမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။
(Zeus Myanmar မှ content များကို ပြန်လည်ကူးယူ ဖော်ပြခွင့် မပြုပါ။)
Marvel ရုပ်ရှင်တွေမှာ စစ်တပ်ပါဝင်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှင်းလင်းလိုက်တဲ့ James Gunn
No Comments on Marvel ရုပ်ရှင်တွေမှာ စစ်တပ်ပါဝင်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှင်းလင်းလိုက်တဲ့ James Gunn
Marvel Cinematic Universe တစ်နည်းအားဖြင့် MCU ကြီးဟာဆိုရင် 2008 ခုနှစ်ထွက် Iron Man ကစလို့ အခုလက်ရှိအထိ phase4ခုမြောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်သလို ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ tv shows တွေလည်း အမြောက်အမြားထွက်ရှိခဲ့ပါတယ် ။ ဒီထွက်ခဲ့သမျှ ရုပ်ရှင်တော်တော်များများမှာ တူညီတဲ့ အချက်တစ်ချက်ကတော့ စစ်တပ်ရဲ့ လွှမ်းမိုးပါဝင်နေမှုပါပဲ ။
စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အသုံးအဆောင်တွေ ပစ္စည်းတွေ ဝတ်စုံတွေကို MCU ထဲ မကြာခဏ မြင်တွေ့ရတဲ့အပေါ် detail က အစလိုက်ကြည့်ထားတဲ့ တစ်ချိူ့သော fan တွေကတော့ ဒီအရာတွေအတွက် တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ရထားသလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေထုတ်လာကြပါတယ် ။
ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး GOTG director James Gunn ပြန်လည်ဖြေရှင်းထားတာကတော့
‘ Marvel ရုပ်ရှင်တိုင်းရဲ့ ဇာတ်ညွန်းတွေအတွက် စစ်တပ်ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်ကို ငါတို့ မယူခဲ့ပါဘူး ။ လူတွေ ဘာကြောင့် ဒီလို ပေါက်တတ်ကရတွေကို ပြောနေကြလဲ ငါအံ့သြမိတယ် ။ ဒါပေမယ့် စစ်တပ်အခြေခံတဲ့ အထူးဇာတ်ညွန်းတွေမှာတော့ ခွင့်ပြုချက်ကို ယူရတာအမှန်ပါပဲ ။ ဒါကလည်း တော်တော်ကို ကြုံတောင့်ကြုံခဲပါ ။ ငါသိသလောက် စစ်တပ်ဖက်ကလည်း အနုပညာလောကနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အရမ်းကြီး မတင်းကျပ်ထားပါဘူး ။ Marvel ရုပ်ရှင်တွေ အားလုံးဟာ စစ်တပ်ခွင့်ပြုချက်ကို အမြဲ မဖြစ်မနေယူရတယ်လို့ လူတွေပြောနေကြတာက တကယ့်ကို အဓိပ္ပါယ်မရှိတာပဲ။ ငါရိုက်ခဲ့သမျှ ရုပ်ရှင်တိုင်းမှာလည်း ဘယ်တော့မှ ခွင့်ပြုချက် ယူခဲ့တာမဟုတ်ဘူး ။ ‘ လို့ twitter မှာ ပြောကြားထားခဲ့ပါတယ် ။
Army Of The Dead Sequel ရဲ့ Title Planet Of The Dead
No Comments on Army Of The Dead Sequel ရဲ့ Title Planet Of The Dead
Zack Snyder ရဲ့ Army Of The Dead ဟာ May လမှာထွက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးအားပေးမှုတစ်ခဲနက်ရရှိခဲ့ကာ Snyderverse အသစ်တစ်ခုအဖြစ်လူတွေလက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။
DC အတွက် Snyderverse ဟာမရေရာမသေချာပေမယ့် Army Of The Dead အတွက် Snyderverse ကတော့အရှိန်အဟုန်မြင့်လျက်ရှိပါတယ်။
Inverse နဲ့ Interview တစ်ခုမှာ Zack Snyder ဟာသူ့ရဲ့ Army Of The Dead Sequel အကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ Title ကတော့ Planet Of The Dead ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Army Of The Dead ရဲ့ Prequel ဖြစ်တဲ့ Army Of Thieves ဟာဆိုရင်သန်ဖက်ခါ သောကြာနေ့မှာ Netflix မှာဖြန့်ချီတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Zack Snyder ဟာ Movie genre မျိုးစုံကိုသူ့ရဲ့ zombie-infected universe ကြီးထဲမှာချပြသွားမှာဖြစ်လို့ဘယ်လိုပုံစံတွေမြင်ရဦးမလဲဆိုတာတော့စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။
Tom Holland ပြောတဲ့ No Way Home ရဲ့အမိုက်ဆုံး scene တစ်ခု
No Comments on Tom Holland ပြောတဲ့ No Way Home ရဲ့အမိုက်ဆုံး scene တစ်ခု
Tom Holland ဟာ Empire Magazine နဲ့ interview တစ်ခုမှာသူ့အတွက်အရမ်း special ဖြစ်လွန်းတဲ့ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခုအကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။
“ကျွန်‌တော် အဲ့တုန်းကကျွန်တော့်ညီနဲ့အတူအဲ့တာကိုကြည့်နေတာဗျ ကြည့်ရင်းနဲ့ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်လုံးပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ် ဇာတ်ဝင်ခန်းကတော့ ကျွန်တော်ရယ်၊Aunty May ရယ်၊ Happy ရယ် ပြီးတော့နောက်ထပ်စတုတ္ထမြောက်လူတစ်ယောက်ရယ် စားပွဲတစ်ခုမှာဝိုင်းထိုင်ပြီး superhero တစ်ယောက်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကိုဆွေးနွေးကြတာပါ တကယ်အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီး တစ်ကယ်မိုက်ပါတယ် အဲ့စတုတ္ထလူအကြောင်းကိုတော့ကျနော်ပြောပြလို့မရဘူးလေ” လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးကတော့”စတုတ္ထလူ”ပါပဲ Dr. Strange လား? ဒါမဲ့ Dr ဆိုရင်သူလျှို့ဝှက်နေစရာမလိုဘူးလေ။ ဒါဆို Dr. Octopus လား? ဒါလဲလူတွေသိပြီးသားပဲ။
Spoiler Man လေးကတော့ဇာတိပြနေပါပြီ။ ဘယ်သူလဲဆိုတာသာပြောလိုက်ရင်တော့ Kevin Feige ကြီး အိမ်တိုင်ရာရောက်ပါးလာရိုက်မှာစိုးလို့ထင်ပါတယ်။ စတုတ္ထလူကဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုတာတော့စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။
Super Smash Bros လိုမျိုးဂိမ်းတစ်ခုထုတ်မယ့် WB
No Comments on Super Smash Bros လိုမျိုးဂိမ်းတစ်ခုထုတ်မယ့် WB
WB ဟာ Netherrealm ဆိုတဲ့ဂိမ်းတစ်ခုထုတ်လုပ်ဖို့စီစဉ်နေပြီးထိုဂိမ်းဟာ Super Smash Bros လိုပုံစံလာမယ်လို့သိရပါတယ်။
ဒီ idea ဟာ Shaggy (from Scooby Doo) ကိုတခြား character တွေနဲ့ချခိုင်းတဲ့ meme တွေကနေအကောင်အထည်ပေါ်လာတာဖြစ်ပြီး ဒီဂိမ်းမှာဆိုရင် WB ရဲ့ character တွေအချင်းချင်း battle လုပ်နိုင်မှာပါ။
ကြားရတာကြောင်တောင်တောင်နိုင်ပေမယ့်သေချာစဉ်းစားကြည့်ရင်တကယ်ကိုမိုက်ပါတယ်။ Space Jam2မှာဆိုရင်လဲ WB ဟာသူတို့ရဲ့ Multiverse တွေကိုရှယ်ကြီး crossover လုပ်ပြသွားတာပါ။
ဂိမ်းထဲမှာပါဖို့ confirm ပြီးသား character တွေကတော့
-Shaggy (Scooby Doo)
-Gandalf (Lord Of The Rings)
-Harry Potter and Ron
-Johnny Bravo တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ကျရင်တခြား character တွေရာနဲ့ချီ ထောင်နဲ့ချီထပ်ထည့်လို့ရပါသေးတယ်။ တကယ်ကောင်းတဲ့ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါ။
Harry Potter ကိုဆရာဘတ်နဲ့ခေါင်းရိုက်ခွဲချင်လား? Shaggy ကို Gandalf နဲ့ချခိုင်းမလား? ဂိမ်းထွက်လာရင်လုပ်ချင်တာလုပ်လို့ရပါပြီ။ (Tom vs Jerry ဆိုရင်တော့အဲ့ပွဲပြီးမယ်မထင်)
Venom: Let there Be Carnage ရဲ့ Box Office အခြေအ‌နေ
No Comments on Venom: Let there Be Carnage ရဲ့ Box Office အခြေအ‌နေ
Venom: Let There Be Carnage ဟာဆိုရင် October 1 ရက်နေ့မှာစတင်ပြသခဲ့တာဖြစ်ပြီးယခုအချိန်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာအောင်မြင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
Box Office မှာ $352.4 Million အထိရရှိထားပြီးနိုင်ငံပေါင်း 53 နိုင်ငံကပိတ်ကားပေါင်း 17,400 ကျော်မှာပြသခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
No Time To Die နဲ့အပြိုင်ဖြစ်နေပြီး 31 နိုင်ငံမှာ No. 1 အဖြစ်ရပ်တည်နေပါတယ်။ Russia မှာဆိုရင် $30.3 Million နဲ့ 8 ခုမြောက်ဝင်ငွေအများဆုံးဇာတ်ကားဖြစ်လာပါပြီ။
Loki ရိုက်ချင်ပေမယ့် မအားဘူးဆိုတဲ့ James Gunn
No Comments on Loki ရိုက်ချင်ပေမယ့် မအားဘူးဆိုတဲ့ James Gunn
The Best Show of All Time စာရင်းဝင်သွားတဲ့ Loki series ဟာတော့ Season2ထွက်ရှိလာဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း စိတ်မကောင်းစွာ Season 1 ရဲ့ Director Kate Herron ကတော့ Season2အတွက်သူပြန်လာတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
အခုဆိုရင်တော့ Fan တွေ က The Guardians of the Galaxies Franchise နဲ့ Suicide Squad တို့ရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင် Director James Gunn ကို Season2ရိုက်ကူးချင်လားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေအပေါ် James ကတော့အခုလိုတုန့်ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။
” အဲ့တာ အရမ်းမိုက်တာပေါ့… ဒါပေမယ့်လည်း ငါလက်ထဲမှာကအကုန်အပြည့်ပဲလေ ပြီး‌တော့ Loki က Kate ရဲ့ ခြေလှမ်းအတိုင်းလိုက်နိုင်မယ့် မှန်ကန်တဲ့ Director ကိုတွေ့မှာသေချာပါတယ် “
James Gunn ကတော့ အသစ်စက်စက် Suicide Squad ရုပ်ရှင်သစ်ကိုရိုက်ကူးထားခဲ့ပြီး Rating တွေလည်းကောင်းခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိမှာလည်း Marvel ရဲ့ The Guardians of the Galaxies Vol3ကိုရိုက်ကူးလျက်ရှိပါတယ်။
လက်ရှိ Marvel comic တွေထဲမှ မြင်တွေ့ရတဲ့အကြောင်းအရာများ
The Multiverse Of Madness မှာ X-Men တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ရှိ မရှိ?
Christmas Eve အတွက် ရုပ်ရှင် ၇ ကား
Vivre Card Databook (One Piece)
© 2022	ZEUS Myanmar